MEGA LED LIGHTING LIMITED - အလင်းအရှိန်ကိုရွေ့လျားစေသော ဦး ခေါင်းမီးအလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူကိုအာရုံစိုက်ပါ
နှင့်အတူတစ် ဦး က R & D ကိုအသင်း
ကျော်လွန် 14 နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသူ
ကတည်းက 2006, MEGA သည်စင်မြင့်အလင်းရောင်အထူးပြုခဲ့သည်, စတူဒီယိုအလင်းရောင်နှင့်ဗိသုကာအလင်းရောင်. ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM & ODM ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်, သင်၏အဆင့် (သို့) ဖြစ်ရပ်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်များ.
ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် CE & RoHS ဖြစ်သည်. ISO Execute:9001 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် GB / IEC ထုတ်လုပ်မှုစံတင်းကြပ်စွာ.
8 လိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း, ၏လစဉ် output ကိုအတူ 50,000 ယူနစ်. လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်အချို့မှာအမြဲတမ်းရှိနေသည်, ခဲအချိန်စောင့်ဆိုင်းခံရဖို့မရှိတော့ပါ.
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းပို့ပါ, ငါတို့အတွင်း၌ပြန်ပြောမည် 24 အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့်နာရီ
ဇန်နဝါရီလ 04, 2021
ချစ်ခင်ရပါသောဖောက်သည်: အတွက် MEGA PRO LITES ကုမ္ပဏီကိုကူညီပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် 2020. ၏တရုတ်နှစ်သစ်ကူး 2021 ချဉ်းကပ်နေသည်, မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်, မိသားစုတစ်စုလုံးပျော်ရွှင်စွာခံစားကြရသည်, နွား၏နှစ်တွင်သင်၌ကံကောင်းပါစေ! CNY အားလပ်ရက်များဆင်နွှဲနိုင်ရန်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဖေဖော်ဝါရီလမှအနားယူပါမည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2020
No.48 Fengshen ရိပ်သာလမ်း, Huadu ခရိုင်, Guangzhou City, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်